Fatahaada webiga Dawa iyo roobab mahiigaan oo khasaare Gaadhsiiyey Dawlad degan Somalida – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Fatahaada webiga Dawa iyo roobab mahiigaan oo khasaare Gaadhsiiyey Dawlad degan Somalida
Fatahaada webiga Dawa iyo roobab mahiigaan oo khasaare Gaadhsiiyey Dawlad degan Somalida
Dawlad deegaanka itoobiya Roobab mahiigaan ah oo ay weheliso daadad ayaa sababay khasaare hantiyeed oo ka dhacay magaalooyinka #DollowcAdo, #Suufka iyo #BoqolMayo ee gobolka Liiban dowlad deegaanka somaalida, sida uu u sheegayo wariye Faysal Shilaabo Radio Fana.
Fatahaada webiga ee Dawa oo ay weheliso roobab mahiigaan ah ayaa xaalada ka dhigay mid “aan la qiyaasi karin” maaddaama ay “ka barakaceen guryahooda.” Fatahaada culus ayaa sidoo kale waxyeelo gaarsiisay bulshooyinka ku nool webiga #Shabele gaar ahaan meelaha sida #Qalaafe iyo #Feerfer, ayuu yiri Faysal.
Ma jirin wax taageero ah oo loo fidiyay dhibanayaashu labadaba oo ka yimid maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Fatahaada iyo roobka culus ayaa ku qasbay bulshooyinka inay ka cararaan guryahooda, sida uu sheegay Faysal.
Previous articleAXKAAMTA SOONKA – Dersiga 4AAD
Next articleDhul Gariir ka dhacey Borama